Guddi Baarlamaan oo soo ban-dhigay liiska Magacyo haween Soomali ah ay kufsadeen ciidanka Kenya iyo Raaskabooniyiintu | warsugansomaliya.wordpress.com
Gudoomiya ku-xigeenka gudiga amaanka baarlamaanka Soomaaliya, Daahir Amiin Jeesoow, ayaa waxa uu xaqiijiyay in tira haween Soomaaliyeed ay fara xumeeyeen ciidamada Kenya iyo dagaalamayaasha Axmed Madoobe.
Daahir Amiin Jeesoow ayaa waxa uu shaaciyay in ilaa todoba gabdhood siyaabo kala duwan u kufsadeen ciidamada Kenya ee Kismaayo uga qeyb qaatay dagaalkii shalay iyo dagaalamayaashii ay garabka siinayeen ee Axmed Madoobe kadib markii ay magaalada ka saareen dhinacyadii dagaalka uga soo hor-jeeday.
Sedax kamid ah gabdhahaasi oo lagu kala magacaabo Nasro Cusmaan Cali, Xaawo Maxamed Cali iyo Sahro Cabdullahi Buule waxaa kusfaday ciidamada Kenya kadib markii ay gurya kala bexeen xilli ay baaritaan ku sameynayeen xaafado ay ku noolaayeen madaxweynayaashii laga awooda roonaaday.
Afarta kale oo iyana uu magacyadooda ku sheegay Xidhibaan Jeesoow Nimco Xassan Axemd, Yaasmiin Aadan Xuseen, Fardowso Xuseen Baalle iyo Aasiyo Cali Aadan iyana waxaa kufsaday raga daacada u ah Axmed Madoobe iyada oo kufsigaasi uu dhacay dhamaan wixii ka danbeeyay markii ay magaalada gacan ku-heynteeda la wareegeen.
Kufsigaan ayaa waxaa la qiyaasayaa in uusan aheyn mid laga lahaa dana la xariira hamuun ay Kenyaatiga iyo dagaalamayaasha Axmed Madoobe u qabaan fara xumeyn dumar hasa yeeshee waxaa la’aaminsanyahay in uu salka ku hayo naceyb iyo ku xumeyn dagaalamayaashii magaalada laga saaray oo haweenka lafara xumeeyay ay isku heyb yihiin.
Fikirkaas waxaa horay uu uga dhici jiray qabaa’ilaadka kala duwan ee Afrikaanka ah marka ay dagalaamaan iyada oo lafilayo in Keenyaatiga oo soo min-guuriyay uu ka dhaadhiciyay ragga daacada u ah Axmed Madoobe.
← Maxaa ka jira in Xassan Daahir lageeyay Madaxtooyada Soomaaliya si looga saro fikirka uu aaminsanyahay?
War Deg Deg Ah Qaar kamid ah Madaxweynayaashii Jubaland State oo Kismaayo laga soo tarxiilay Muqdishana laga soo dajiyay →